बर्दियाका २९ सयमा सिकलसेल एनिमिया भएको पुष्टि - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ जनस्वास्थ्य ∕ बर्दियाका २९ सयमा सिकलसेल एनिमिया भएको पुष्टि
बर्दियाका २९ सयमा सिकलसेल एनिमिया भएको पुष्टि
हेल्थ आवाज शनिबार, २०७६ भदौ ७ गते, १३:५७ मा प्रकाशित
काठमाडौं— थारु समुदायमा बढी देखा पर्ने सिकलसेल एनिमियाको संक्रमण बढ्दैं गएको छ । चिकित्सकहरुका अनुसार सिकलसेल एनिमिया एक किसिमको रगतसम्बन्धी वंशानुगत रोग हो ।
बर्दिया जिल्लाको बारवर्दिया नगरपालिकामा २५ हजार जनसंख्याको नमुना संकलन गर्दा ११.६ प्रतिशत अर्थात २९ सयमा सिकलसेल एनिमिया देखिएको हो । नेपाल सरकारले लिएको सक्रियता, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशनपछि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले एक वर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनले सो क्षेत्रका अत्याधिक जनतामा सिकलसेल एनिमिया भएको देखाएको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अध्यक्ष डा. अन्जनीकुमार झाले बारवर्दियाको जम्मा २५ हजार जनसंख्यामा सिकलसेल एनिमिया परिक्षण गरिएको बताए । ‘सिकलसेल एनिमिया आमाबावु दुवैमा भए सन्तानमा पनि संक्रमित हुने गर्छ,’ अध्यक्ष डा. झाले भने, ‘अनुसन्धानमा आमाबावु दुवैमा सिकलसेल एनिमिया देखिएको छ ।’
१ वर्षदेखि ३९ वर्ष उमेर समूहमा यसको परीक्षण गरिएको थियो । सबै नमुना वीर अस्पतालमा परीक्षण गरिएको हो । त्यसका लागि सरकारले दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
सिकलसेल एनिमिया भएको व्यक्तिको मृत्यु हुने दर बढी देखिएको छ । वीर अस्पतालकी वंशाणुगत रोग विशेषज्ञ डा. निलम ठाकुरले सिकलसेल एनिमिया भएका बिरामीको मृत्युको दर पनि निकै बढी हुने बताइन् । ‘उनीहरुले स्वास्थ्यका बारेमा ध्यान दिदैनन्,’ डा. ठाकुरले भनिन्, ‘बच्चाहरु बिरामी हुन्छन् तर के रोग लागेको हो भन्नेबारे जानकारी राख्दैनन् । जसले गर्दा मृत्युदर बढी हुन्छ ।’
रगतको कोषिकामा क्रोमोजोम र जीन हुन्छ । तिनमा खराबी आएको खण्डमा सिकलसेल एनिमिया हुन्छ । सिकलसेल एनिमिया रगतको रातो रक्तकोषभित्र रहने र हेमोग्लोबिनलाई असर पार्ने वंशानुुगत रोग हो ।
राज्यको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार
‘सिकलसेल एनिमिया वंशाणुगत रोग भएकाले उपचारका माध्यमबाट निर्मुल पार्न सकिदैंन् । रोग नियन्त्रण गर्न मात्रै सकिन्छ,’ डा. ठाकुर भन्छिन् । उनका अनुसार सिकलसेल एनिमिया देखिने र लुकेको अवस्थामा हुन्छ । सरकारले यो रोग लागेका बिरामीका लागि एक लाखको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरेको छ ।
थारु समुदायभन्दा बाहिरका ब्यक्तिलाई पनि सिकलसेल एनिमिया रोग देखा पर्न सक्छ । ‘स्वास्थ्य उपचारमा ध्यान नदिने हुँदा थारु समुदायमा बढी देखिएको हो,’ डा. ठाकुर भन्छिन् । यसको परीक्षण विभिन्न अस्पतालमा भएपनि सरकारले पूर्ण रुपमा सुविधाको व्यवस्था भने वीर अस्पतालमा गरेको छ ।
सिकलेस एनिमियाले निम्त्याउने जटिलताहरू
सहनै नसक्ने गरी शरीरका अंगहरुको दुखाइ हुनु
कलेजो ठूलो हुनु
रगतको कोषिका जहाँ छन् त्यही रोग लाग्नु
अत्याधिक ज्वरो र झाडापखाला हुनु
रक्त अल्पता आदि ।